‘भूरा माछा’ प्रकरणमा अर्थमन्त्री महराको अन्तर्वार्ता - Ratopati
‘भूरा माछा’ प्रकरणमा अर्थमन्त्री महराको अन्तर्वार्ता - | कृष्णबहादुर महरा, उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री के हो यो सुन तस्करीको रहस्य ? तपाईंको अर्थ मन्त्रालय मातहतको भन्सार त चौपट भयो नि विमानस्थलमा ?
तपाईंले पोखरामा आफू पनि तस्करीमा संलग्न भएको स्वीकार गर्नुभयो रे !
यस्तो वाहियात कुरा पनि कसरी हुनसक्छ ? मैले म पनि तस्करीमा संलग्न छु भनेर कतै भनेको प्रमाण तपाईं दिन सक्नुहुन्छ ? पोखरामा मैले त्यस्तो बोलेको भए त्यसको रेकर्ड त होला नि कसैसँग ? मिडियामा अत्यन्त गैरजिम्मेवारीपन देखिएको छ । यस्तो सस्तो पर्चाकारिता र गैरजिम्मेवार पत्रकारिता देशको निम्ति दुर्भाग्यपूर्ण हो । पत्रकार मित्रहरूलाई जिम्मेवार ढंगले प्रस्तुत हुन म आग्रह गर्दछु तपाईंको पत्रिकामार्फत् ।
विमानस्थलमा कार्यरत भन्सार र सुरक्षा निकायका कर्मचारी त भूरा माछा मात्र हुन् । भूरा माछालाई मात्र समातेका छौं, ठूला माछा त अझै कता छन् कता भनेर मैले बोलेको हो पोखरामा । भन्सारका कर्मचारीहरू त भूरा माछा मात्र हुन् भनेर बोलेको कुरालाई मिडियामा गलत ढंगले प्रचार गरिएको छ । यस्तो गलत प्रचारमा जिम्मेवार पत्रकार कसरी र किन प्रस्तुत भइरहेका छन् ? मलाई आश्चर्य लागेको छ ।
दश वर्षसम्म तपाईंहरूले सशस्त्र युद्ध गर्नुभयो । यस्तै खालका विकृतिहरूका विरुद्ध तपार्इंहरूले हतियार पनि उठाउनुभयो, तर अहिले तपाईंहरू नै सत्तामा रहेका बेला विकृति त बढेर गयो नि ? कस्तो लाग्छ तपाई्रलाई ?
यस्तो किन नि ? किन केही गर्न नसक्नु भएको हो त ?
पुरानो संरचना भत्काउनलाई त युद्ध जितेरै आउनुपथ्र्याे नि हैन र ?
अवश्य हो । पुरानो संरचनालाई पनि नीतिनियमहरूमा परिवर्तन गरेर नयाँ ढंगले परिचालन गर्न सकिएला भन्न लाग्छ मलाई । तर अहिलेसम्म पुरानै संरचना र पुरानै नीतिनियम भएकाले यस्तो अस्तव्यस्त भएको हो कि ?
हाम्रो देशको भौगोलिक अवस्था र राजनीतिक अस्थिरताका कारणले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय गिरोहहरू सक्रिय हुन खोजिरहेको अनुभव सरकारले गरेको छ । यो गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्न विशेष योजना पनि बनाइएको छ । हेर्दै जाऔं, प्रभाव कस्तो पर्छ ?